Phawula: Kusukela ngo-May 31, 2022, sibuyekeze ikhavareji ye-COVID-19 ngaphansi komthetho wezimo ezingalindelekile:
• Ngokuqondene nokubhukha okwenziwe ngo-May 31, 2022 noma ngemva kwalokho, izimo ezingezansi ezihlobene ne-COVID-19 ngeke zisathola ikhava (ngaphandle kokubhukha kwabantu base-South Korea). Kunalokho, inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza njengokuvamile.
Kuvuselelwe ngomhla ka- May 31, 2022
Ngo-March 11, 2020, i-World Health Organization (WHO) yamemezela ukuqubuka kwe-coronavirus, eyaziwa ngokuthi yi-COVID-19, njengobhubhane lomhlaba wonke. Kusukela ngaleso sikhathi, ukuqubuka kuye kwasabalala ngokushesha nohulumeni emhlabeni wonke bethatha izinyathelo ezisheshayo zokunqanda ukubhebhetheka kwe-COVID-19.
Ngenxa yalokho, siye sanikeza ikhavareji elandelayo ye-COVID-19 ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile ukuze sivikele umphakathi wethu futhi sikunikeze ukuthula kwengqondo.
Ukubhukhwa kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngo-March 14, 2020 noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena oluphakathi kwezinsuku ezingu-45 ezilandelayo ukusuka namuhla, kuhlanganisiwe kunqubomgomo futhi kungakhanseleka ngaphambi kokungena. Izivakashi ezikhanselayo zizoba nezindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali, futhi Ababungazi bangakhansela ngaphandle kokukhokhiswa noma ukuphazamiseka kwesteyithasi sabo soMbungazi Ovelele uma benganikeza ubufakazi obuqinisekisayo bokuthi bayafaneleka. I-Airbnb ingase ibuyise imali, noma inikeze ikhredithi ehlanganisa, wonke amanani esevisi okukhansela okunekhava. Ukuze ukhansele ngaphansi kwenqubomgomo, kuzodingeka unike ubufakazi bamaqiniso kanye/noma unikeze amadokhumenti anobufakazi besimo sakho.
Inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza ngendlela evamile ekubhukheni okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020 nangaphambi kuka-May 31, 2022, ngaphandle kwalapho isivakashi noma uMbungazi egula ephethwe yi-COVID-19.
Ekubhukheni okwenziwe ngo-May 31, 2022 noma ngemva kwawo, inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza. Izimo ezihlobene ne-COVID-19 ngeke zibe nekhava, ngaphandle kokubhukha kwabantu base-South Korea lapho isivakashi noma uMbungazi egula ephethwe yi-COVID-19.
Ukukhansela kuzosingathwa ngokuvumelana nekhava yezimo ezingalindelekile esuke ikhona lapho kuthunyelwa, futhi ukubhukha obesekukhanseliwe kakade ngeke kucatshangelwe kabusha.
Kusebenza izinqubomgomo ezihlukile ekubhukheni kwabantu base-mainland China kanye nokubhukha kwe-Luxe.
Ukubhukha kokuhlala noKokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngomhla ka-March 14, 2020 noma ngaphambi kwawo, okunosuku lokungena olusezinsukwini ezingaphezu kuka-45 kusukela namhlanje, akuhlanganisiwe okwamanje ezimweni ezihlobene ne-COVID-19. Inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza njengokuvamile.
Ukubhukha okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020 nangaphambi kuka-May 31, 2022
Ngokuqondene nokubhukha kwezindawo zokuhlala kanye noKokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020 nangaphambi kuka-May 31, 2022, inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza njengokuvamile futhi izimo ezihlobene ne-COVID-19 ngeke zibe nekhava ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile, ngaphandle kwalapho isivakashi noma uMbungazi egula ephethwe yi-COVID-19. Izimo ezihlobene ne-COVID-19 ezingenayo ikhava zibandakanya: ukuphazamiseka nokukhansela kwezinto zokuhamba; imithetho nemingcele yokuhamba; imithetho yezempilo nokuhlukaniswa nabantu; izinguquko emthethweni osebenzayo; nokunye okuyimiyalo kahulumeni—efana nemiyalo yokuphuma endaweni, ukuvalwa kwemingcele, ukwenqatshelwa kokuqasha isikhathi esifushane, kanye nezimfuneko zokuhlala lapho ukhona.
Ukubhukha okwenziwe ngo-May 31, 2022 noma ngemva kwawo
Ngokuqondene nezindawo zokuhlala kanye noKokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngo-May 31, 2022 noma ngemva kwawo, inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi izosebenza. Izimo ezihlobene ne-COVID-19 ngeke zibe nekhava ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile, ngaphandle kokubhukha kwabantu base-South Korea lapho isivakashi noma uMbungazi egula ephethwe yi-COVID-19.
Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile uhloselwe ukuvikela izivakashi naBabungazi ezimweni ezingalindelekile ezivela ngemva kokubhukha. Ngemva kokumenyezelwa kwe-COVID-19 yi-World Health Organization njengobhubhane lomhlaba wonke, umthetho wezimo ezingalindelekile ngeke usasebenza ngoba i-COVID-19 kanye nemiphumela yayo akusekona okungalindelekile noma okuzumayo. Sicela ukhumbule ukuhlola ngokucophelela inqubomgomo yokukhansela yoMbungazi lapho ubhukha futhi ucabangele ukukhetha okuhlinzeka ngezinga olidingayo lokuvumelana nezimo.